Ukulahleka okukhona kukho konke okuthandwa
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-16)
I-yogurt a Messina okuyisitolo esimnandi seyogathi, ekahle uma ufuna ukujabulela izibiliboco ezintsha ezisuselwa kuzo I-yogog neCrepes, i-semifreddo, amajusi wezithelo, ukugoqa, ama-vegan croissants nokunye okuningi!
I-yogurteria eMessina - Yokudla kwasekuseni kwenkosi
La I-yogurt ilungele ukuqala okuhle kosuku. Wonakele ngokukhetha phakathi I-yogog neCrepes, izithelo ezi-centrifuged, isaladi lezithelo, ama-croissants kanye ne-cannoli. Lapho I-yogurt unikela njalo ekuseni kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ikhofi elishisayo nama-croissants azo zonke izinto ozithandayo, kufaka phakathi i-vegan, i-wholemeal ne-nut. Lapho I-yogurt elinde wena ukunambitha I-yogurt ithambile nge-lime nezithelo, ngokubambisana no-MEC 3. Injabulo ngayinye idalwa ngezinto ezikhethiwe ngokucophelela futhi ezihlale zihlanzekile.
I-yogurteria eMessina - Indawo ekahle yokudla okulula
I-yogurt a Messina okungaphezulu kakhulu kwe- I-yogog neCrepes! Eqinisweni, ungathola nokudla okulula njengokusonga, amasemishi kanye nethosi. Awuyithandi yini i-dessert namuhla? Bese ukhetha ubuhle obunosawoti be I-yogurteria eMessina. Njalo umzuzu nguye ofanele ukuya eYogurteria! Manje sekuyindawo yokubhekiswa kulabo abafuna ukudla okuthile bebaleka ngaphandle kokunikela ngekhwalithi: ukubona ukukholwa! Lapho Iyogathi, Ivumela uma ungafuni ukuphuma, ukunambitha okumnandi kwayo ngenkathi uhlala ekhaya kamnandi. Inika indlela esheshayo nephumelelayo Inkonzo Yasekhaya.
Iyogathi eMessina - Okwezinyo elimnandi
La I-yogurt a Messina inikeza izidakamizwa eziningi ezisuselwa ku-MEC 3 ice cream eyenziwe ekhaya, I-yogog neCrepes, i-semifreddi, i-yogurt efriziwe, ama-pancake, ama-sorbets, ushokoledi oshisayo nama-waffles wokuhlanganisa ngokokuthanda kwakho! Yini enye ongayifuna? Kusuka kuYogurteria a Messina ungazitika ngokunikeza imicabango yakho mahhala. Kungumbuso wokunambitheka okuhlukahlukene, ubujamo nemibala… ukuqhuma kwangempela kokuminza! Ungakutholaphi konke lokhu endaweni eyodwa? Ngokwemvelo eYogurteria!
I-yogurt eMessina - Ikhwalithi nobungani
La I-yogurt a Messina akukhona ukuminza nje kuphela kepha futhi, futhi ngaphezu kwakho konke, ikhwalithi, insizakalo nokuzithoba! Zivumele ukhungatheke ngozwela lwabasebenzi baseYogurteria: endaweni enemibala futhi engahlelekile uzothola iqembu elilungele ukukukweluleka phakathi kokunambitheka okuningi kwe I-yogog neCrepes! Nsuku zonke iqembu le-Yogurteria lokuya kaningi ngokuthanda kwakho. Ukudla kwasekuseni, isidlo esimnandi noma isidlo esihlwabusayo, sebenzisa ithuba lokukhetha okubanzi okunikezwa yi I-yogurteria eMessina.